မယ်သံ: အောင်းမေ့ဘွယ်၇ာ ရွှေတမာ (၂)
Thandar Lwin June 11, 2011 at 9:41 PM
Nice pose that can able to draw our campus-life memories.......Thanks for sharing and looking forward to read follow up pose..
thanks for bringing memories of CGTI
June 11, 2011 9:59 AM
မသန္တာလွင်... Good Articles and Thanks for sharing your posts.
Thandar Lwin June 12, 2011 at 12:34 PM
Hi ama, you wrote about some events of our academic years. You havealot of events remaining to write. I love the poems those were composed by one of my friend and classmate. Whatever we become fresh and miss our Technical student hood in Chauk, while reading your articles or essays those will decide professionals of literature. I will be waiting for yours to read.
သက်ဝေ June 12, 2011 at 1:14 PM
စာဖတ်ရင်း သမီးလေးပုံတွေ ကြည့်သွားတယ်...
ကောင်းသော နားရက် ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ...
စော(အဝါရောင်မြေ) June 30, 2011 at 4:35 PM
ကျောင်းတက်ရတုံးက ငိုရ၊ ပျော်ရ တာတွေကို သတိရတယ်။
အဲဒီတုံးက မြို့ ထဲကသူတွေ ကျောင်းမှန်လွန်းလို့အဆောင်သူတွေက မကြည်ဘူး။ မတက်ရင် စာတွေလွတ်ကုန်မှာကို။
T T Sweet September 11, 2011 at 4:24 AM
လွမ်းစရာလေးတွေပေါ့။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကျောင်းတုံးကသူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် သတိရသွားတယ်။ အဆောင်နေတုံးက အမှတ်တရလေးတွေ ရေးချင်သေးတယ်။
Thandar Lwin September 12, 2011 at 10:37 AM
ရေး ပါ မမ ။ မမ ဘာရေးရေးကို ကြိုက်နေတာ ။ တကယ်ပြောတာ ။